Dowladda Masar oo deeq waxbarasho u fidisay Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Masar oo deeq waxbarasho u fidisay Soomaaliya.
Dowladda Masar oo deeq waxbarasho u fidisay Soomaaliya.
Al-Qaahira (SONNA)- Guddoomiyaha Jaamacadda Banha ee dalka Masar Dr. Yusuf Al-qadi ayaa shaaca ka qaaday inay Jaamacadiisu 5 deeq waxbarasho oo lacag la’aan u fidisay Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Jaamacadda Banha ee dalka Masar Dr. Al-Qaadi oo la hadlayay Jaridka, ayaa sheegay in qaraarkaasi ay gaartay Jaamacadiisa uu yahay mid astaan u ah heerka uu gaarsiisan yahay cilqaadka iyo xiriirka Taariikhiga ah ee Masar iyo Somalia oo qarniyo soo jiray iyo qadarin loogu muujinayo shacabka Soomaaliyeed isbarbartaga iyo saaxibtinimada ay u muujiyeen Masar.
Deeqdan waxbarasho oo ay Masar u fidisay Somalia, ayaa ah marxaladda waxbarashada Sare ee Jaamacada Banha oo ka mid ah Jaamacadaha ugu tayo waanaagsan Xagga waxbarashada Tacliinta sare ee dalkaasi Masar.
Dhowaan ayey aheyd markii Garoonka diyaaradaha Magaaladda muqdisho ay ka ambabaxeen 76 arday, kuwaas oo deeq waxbarasho ka helay Dalka Masar, waxaana Garoonka ku sagootiyay masuuliyiin uu horkacayey Ra’isul wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ugu Hambalyeeyay Ciidamada Xoogga dalka guulaha ay gaareen
Next articleRa’iisul wasaare ku xiggeenka XFS oo Magaaladda Sharma-sheekh kula kulmay R/wasaaraha Masar “Sawirro”